သတိုး: September 2011
“ဖေဖေ ပြန်လာတော့ မှာလား”
…မေးလေတိုင်း ဖေဖေခမျာ မသက်မသာရယ်မောနေရလေ့ရှိသည် တဲ့။ ပြီး… အကြာကြီး အချိန်ယူ စဉ်းစားနေသလို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြန်တော့သည်။ ညိုက ဇွတ်ပင်…
“ပြောဦးလေ။ ဖေဖေ ဘယ်တော့ ပြန်လာမှာလည်း လို့”
သို့တိုင်အောင် ဖေဖေ့ဘက်က တုန့်ပြန်စကား ပြန်မလာ။ တွေဝေနေဆဲထင့်။
“ဖေဖေ ဘယ်တော့ ပြန်လာမှာလည်း လို့”
ညိုတစ်ယောက် ဖေဖေ့အား မချင့်မရဲ ဖြစ်လာရတော့ကာ Gtalk box မှာ သည်စကားတစ်ခွန်းကိုပဲ ဆက်တိုက် ရိုက်ထည့်ပစ်လိုက်တော့သည်။ ဖေဖေ တစ်ဘက်မှာ ပြုံးနေနိုင်ပါ့မလား။ ပင့်သက်မောတွေ ကြိတ်ရှိုက်နေလျှင်လည်း ညို… မကြားနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဖေဖေ ပျော်နေနိုင်မှာ မဟုတ်တာတော့ ခံစားသိနေခဲ့ပါသည်။ ဖေဖေက မိသားစုကို တွယ်တာတတ်သူ တစ်ယောက်ပဲလေ။ ညို့ကိုလည်း အလွန်ချစ်မြတ်နိုးလှတာ။ ညိုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖေဖေ့ရင်မှာ မျှော်လင့်အိပ်မက်တွေ အများကြီး ရှိနေခဲ့တာလည်း ညိုသိပါသည်။ ညိုက ဖေဖေ့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီး မဟုတ်လား။
ညို့ကို မွေးဖွားစဉ်ကတော့ ဖေဖေ့အတွက် သားယောက်ျားလေး မဟုတ်သောကြောင့် မေမေက ဖေဖေ့ကို အားနာနေခဲ့သေးသည်တဲ့။ ဖခင်တို့ထုံးစံ သားဦးမှာ လောက်လောက်လားလား သားယောက်ျားလေးကိုသာ အရူးအမူး လိုချင်တမ်းတတတ်ကြသည်ဖြစ်ရာ ဖေဖေလည်း မေမေ့ကိုယ်ဝန်နှင့်ပတ်သက်ကာ သားရူး ရူးခဲ့ဖူးသည်ပင်။
ဒါပေမယ့် ဖြူဖွေးဝကစ်နေကာ အငိုအရယ်နည်းပါးသော ညိုကလေးက ခြေလက်တွေမြှောက်၊ ကန်ကျောက်တွန်းထိုး၊ လွန့်လူးရုန်းကန်နေချိန်မှာတော့ ဖေဖေ အရည်ပျော်ခဲ့ရသည်။ စကောဝိုင်းထဲမှ ညိုကလေးကို ချော့မြူကျီစယ်ရင်း ဖေဖေပါ စကောတစ်ပတ်လည်အောင် ပတ်ချာလှည့်နေတတ်ခဲ့သည်တဲ့။
အိမ်ကပ်လေ့မရှိသော ဖေဖေက ညို့ကိုမွေးပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ အိမ်နေမမြဲသေးသည့်တိုင် အလျှင်ကထက် အိမ်ကို ပို၍ တွယ်တာလာတတ်သည်ဟု ဘွားဘွားက ပြောဖူးသည်။
“ဘယ်လောက်ပဲ မောလာလာ။ အပြင်က ပြန်ရောက်ရင် သူ့သမီးကိုပဲ တကြော်ကြော်ခေါ်ပြီး အ်ိမ်ပေါ်တက်လာတာပဲ။ ကလေးအိပ်ပျော်နေလည်း အတင်း နမ်းရှုပ်၊ စကားနားမလည်တတ်သေးတဲ့ကလေးကို တီတီတာတာ စကားတွေ ပြော…။ တကယ်ရူးတဲ့ကောင်”
“ဖေဖေက မရူးပါဘူး ဘွားရယ်။ သမီးကို ချစ်လို့ပါ”
ညိုတစ်ယောက် ဖေဖေ့ဘက်က ခုခံကာကွယ်ပြောနေပုံကို ဘွားဘွားက ကျေနပ်ပြုံးတစ်ဝက်နှင့် မျက်စောင်းထိုးနေပြန်တော့သည်။
“ညည်းအဖေကို ညည်းပဲ ကာကွယ်ပါနော်။ ဟွန်း.. သူ့အဖေဆိုရင် အထိကို မခံဘူး”
ညိုကတော့ ဘွားဘွား ဘာပြောပြော ဖေဖေ့ကို ကာကွယ်မြဲပဲ။ တစ်သက်လုံးလည်း ဖေဖေ့အတွက် ကာကွယ်သွားရမှာပဲဟု စိတ်မှာ ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်လေသည်။
“ဖေဖေ့အတွက် တကယ် ကာကွယ်ပေးချင်ရင် သမီး ပညာတတ်အောင်သင်။ ပညာတတ်ရင် ဖေဖေတစ်ယောက်တည်း ကိုမှ မဟုတ်ဘူး။ သမီးရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတိုင်းကို သမီး ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိလာမယ်”
ဖေဖေ့ဆိုလိုရင်းကို အဲသည်စဉ်တုန်းက ညို.. သိပ်တော့ နားမလည်နိုင်ခဲ့သေး။ ဒါပေမယ့် ဖေဖေက ညို့ကို ပညာတတ်စေချင်သည် ဆိုလျှင် ညို ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမည်ဟု စိတ်မှာ စွဲမှတ်ပြီး ဖြစ်နေတော့ပြီ။ တကယ်တမ်းမှာလည်း ညိုက ပညာကို စိတ်ဝင်စားသော၊ တတ်မက်လိုချင်သော စိတ်အခံ ရှိနှင့်ပြီးသားပင်။
ညို့အား ရှစ်တန်းအောင်စာရင်းထွက်ပြီးမှ ကွန်ပြူတာ အခြေခံသင်တန်းတက်ခွင့်ပေးသော မေမေ့ကို ဖေဖေက အားမရနိုင်ခဲ့ပေ။
“သမီးကို အင်တာနက် သုံးတတ်အောင် သင်ပေးပါ။ သူ သုံးပါစေ”
ဘွားဘွားနှင့် မေမေက သဘော မတူချင်ပြန်။
မေမေ့စကားကို ဘွားဘွားက အပြည့်အ၀ ထောက်ခံလေသည်။
“အင်တာနက်က အတတ်ကောင်းတွေ ကလေး… တတ်လာပါ့မယ် ဟယ်”
ဟုလည်း ပူပန်ရင်ဖိနေပြန်သည်။ ဖေဖေက….မေမေ့အား…
“ကိုယ်.. သမီးနဲ့ စကားပြောချင်တယ်။ သမီး အင်တာနက် သုံးတတ်မှ ဖြစ်မယ်”
ပြောလေမှ ညိုတစ်ယောက် အွန်လိုင်းပေါ် ရောက်ရတော့တာ ဖြစ်လေသည်။ Gtalk box ကလေးပွင့်လာတာနှင့် တပြိုင်နက် ဖေဖေ့ အကောင့်မီးကလေး စိမ်းနေတာတွေ့လျှင် ညိုပျော်သည်။ အားတက် ကျေနပ်သည်။ ဖေဖေ့အကောင့်ကလေးကလည်း အခါများစွာ စိမ်းနေတတ်တာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဖေဖေ့ အကောင့်မက်ဆေ့ခ်ျက…
…တဲ့။ ညိုတို့၏ ဘ၀နေသာချိန်နေ့ရက်များကို မျှော်မောစိတ်စောနေသော ညိုကလည်း…
“မင်္ဂလာပါဖေဖေ။ ဖေဖေ နေကောင်းလား”
ဖေဖေ မေးလေသမျှ မေမေနှင့် ဘွားဘွားတို့ အကြောင်း၊ တခြားထွေထွေရာရာလေးတွေကို ဖေဖေ့အားပြန်ပြောပြရင်း ညို့အတွေ့အကြုံ၊ ညို့ခံစားချက်ကလေးတွေကိုပါ ဖေဖေ မြင်တွေ့နားလည်နိုင်မည်ပင်။ ဖေဖေ ညွှန်သော လင့်ခ်တွေဆီ သွားရသေးသည်။ ဆောင်းပါးတွေဖတ်လာကာ ဖေဖေနှင့် ပြန်ဆွေးနွေးရသည်။
“ဖေဖေ့စာအုပ်စင်ပေါ်က ဘယ်စာအုပ်တွေ သမီးဖတ်ပြီး ပြီလဲ”
“ဟီး.. တစ်အုပ်မှ ဖတ်ဖူးသေးဘူး”
“မေမေ ပုံမှန် ရှင်းပေးထားပါတယ် ဖေဖေရဲ့။ တစ်ခါတစ်လေ သမီလည်း ၀ိုင်းကူပေးပါတယ်”
“ဖေဖေ ဆန္ဒကတော့ ဖေဖေ့စာအုပ်စင်ကို သမီးပဲ တာဝန်ယူစေချင်တယ်။ သမီးလည်း အပမ်းမကြီးဘူးဆိုရင်ပေါ့”
ညို.. ငြင်းဆန်ရက်ပါ့မလား ဖေဖေ။ ပြီး.. ဖေဖေ့စာအုပ်စင်ကို ညိုလည်း စိတ်ဝင်စားစ ပြုနေခဲ့ပါပြီ။ ဒီစာအုပ်ကလေးတွေဟာ ဖေဖေ ဖတ်ရှုခဲ့တဲ့၊ ဖေဖေ့ဘ၀ကို လမ်းပြထုဆစ်ပေးခဲ့တဲ့ အရာတွေပဲ မဟုတ်လား။ ဖေဖေ မြတ်နိုးမဆုံးသော စာအုပ်တွေထဲမှာ ဖေဖေ့ရဲ့ပုံရိပ်တစ်ချို့ကို ခန့်မှန်းပုံဖော်ရတာဟာ နှစ်ခြိုက်မွေ့လျော်စရာ အလုပ်တစ်ခုအဖြစ် ညို ပျော်ပိုက်နေခဲ့ပြီ။
“ညို အမှတ်က ငါးရာကျော်ရုံပါ ဖေဖေရယ်။ ဘွားဘွားက သူ အသက်ကြီးပြီတဲ့။ ဆရာဝန် လုပ်ပါတဲ့”
“ဖေဖေကတော့ သမီး သဘောပါ။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာ ကိုယ်လုပ်။ ဖြစ်ထွန်းအောင်တော့လုပ်…”
“ညို.. ဥပဒေပဲ လျှောက်မှာ”
“so good !း) “
တစ်ပြည်ရပ်ခြား ဝေးလှမ်းနေငြားလည်း ဖေဖေ့ကို သမီးကြည့်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဖေဖေ ယုံပြီ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ညိုက ဖေဖေ့အကြိုက်ကို လိုက်လုပ်ပြရုံသက်သက်အတွက်တော့ ဒီလောက် အချိန်ယူပြီး ရင်းနှီးပေးဆပ်မည့်သူ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ညို.. တကယ် ယုံကြည်ရဲခဲ့လို့သာ။
“ပြီးတော့ ညို..reportor လုပ်ဖို့ သတင်းဂျာနယ်တိုက် နှစ်ခုမှာ လျှောက်ထားတယ်။ မေမေနဲ့ ဘွားဘွားက ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ ကာဆီး.. ကာဆီး လုပ်နေကြတယ်။ မေမေ့ကို ဖေဖေ ပြောပေးဦး”
“ပြီးတော့လေ… ဖေဖေ မရယ်ရဘူးနော်။ ညို့ကလောင်နာမည်ကိုလေ ‘ မျှို့’ လို့ပေးချင်တယ်”
“အောင်မြင်ခြင်း လေ ဖေဖေရဲ့”
“သိပ်ကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဲ။ သတင်းလောကမှာ မျှို့ အောင်မြင်ပါစေး)”
“ဖေဖေ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ဝအောင် မျှို့ ကြိုးစားပြမယ်”
“မျှို့ က ဖေဖေ မျှော်လင့်ထားတဲ့ သမီးလေးပဲ။ ကွက်တိပဲ”
“ညည်းအဖေကတော့လေ။ အရူး ဘုံမြှောက်”
ငြိုငြင်စကားတွေ ဆိုနေဆဲဖြစ်သော်လည်း ဖေဖေခွင့်ပြုလျှင် လိုက်လျောမည့်သူဖြစ်သည်ဆိုတာ ညို့ အတွေ့အကြုံအရ သိနေပါပြီ။ ညို့ကို မွေးဖွားပြီးစ အချိန်ကတောင်…
“ကိုယ့်အတွက် နောက်တစ်ခါကျရင် သားလေးတစ်ယောက် မွေးပေးမယ် သိလား”
သားယောက်ျားရူး ချဉ်ခြင်းမပြေသော ဖေဖေ့ကို နှစ်သိမ့်လျှက် ဖေဖေ့အလိုကို ဦးစားပေး ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ခဲ့သေးတာ ဖြစ်သည် မဟုတ်လား။ ဖေဖေကတော့ မျက်နှာပေါ်က ကျေနပ်ကြည်နူးပြုံးတွေကို လက်စမသိမ်းနိုင်သေးပဲ…
“အင်း.. မွေးပါဦး မိန်းမရယ်။ ဒါမှ သမီလည်း အဖော်ရမှာပေါ့။ မဟုတ်ရင် တို့သမီး တစ်ယောက်တည်း ပျင်းနေမှာကွ”
ပြောပြီး သူ့စကား သူ သဘောကျကာ တဟားဟားရယ်မောနေခဲ့သေးသည်တဲ့။
ဖေဖေဟာ အမေတစ်ခု၊ သားတစ်ခုဘ၀ဖြင့် ကာလရှည်ကြာ အထီးကျန်စွာ ကြီးပြင်းလူလားမြောက်ခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါသည်။
“သားတွေ၊ သမီးတွေ အများကြီး မွေးမယ်ကွာ။ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း၊ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ပျော်စရာ ကောင်းလိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်း…”
မိသားစုဘ၀ကို ခုံမင်သော၊ တပ်မက်တွယ်တာလွန်းသော ဖေဖေသည် မောင်လေးကို မမွေးဖွားမီမှာပင် သူ ချစ်မက်တွယ်တာသော မိသားစုနှင့် ချစ်သူ၊ ခင်သူ အားလုံးကို ထားရစ်ကာ မပျော်သော်လည်း တော်ရာ အရပ်သို့ ဝေးလွင့်ထွက်ခွာခဲ့ရတော့တာဖြစ်သည် ။ ခုနေ မောင်လေးရှိနေသေးလျှင်တော့ ဖေဖေ့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေအကြောင်း၊ အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးကာ သစ္စာစောင့်သိတတ်ခဲ့ပုံများ အကြောင်းကို မောင်လေးနားလည်အောင် ဖေဖေ့ကိုယ်စား ရှင်းပြချင်ပါသေးသည်။ ဒါပေမယ့် ဖေဖေ ဖြူသလား၊ မြည်းသလား မမြင်ဖူး၊ မချစ်ကြင်လိုက်ရပဲ မောင်လေးတစ်ယောက် လူ့လောကထဲက ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်မှာ သူကလေး လသားအရွယ်ကတည်းက ဖြစ်သည်။ သောကဒုက္ခ ဟူသမျှ ရင်စီးခံကာ တစ်ချက်ကလေး မညည်းငြူတတ်ခဲ့သော မေမေသည် ချက်ချင်း ညှိုးခြုံးကျသွားတော့သည်မှာ ယနေ့အချိန်ထိတိုင်ပင်။ ဒါပေမယ့် မေမေ့မှာလည်း မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိပါသေးသည်။ ဒါကြောင့်မို့သာ ဒီနေ့၊ ဒီအချိန်ထိ မေမေ အသက်ရှင်ရပ်တည်နေနိုင်သေးတာ မဟုတ်လား။ မျှော်လင့်ချက်တွေသာ သေဆုံးလျှင် ဘ၀လည်း သေမည်ပင်။ မေမေက သမီး၏ အနာဂါတ်အတွက် မျှော်လင့်သည်။ ဖေဖေ့၏ အိမ်အပြန်နေ့ရက်တွေ အတွက်လည်း မ၀ံ့တ၀ံ့ ရင်ခုန်စွာ မျှော်လင့်ချက် ရေးရေးပြပြတော့ ယနေ့တိုင်ရှိနေဆဲပါပင်။
ခုတော့ အငြိုးအမုန်းတို့ သင်ပုန်းခြေရန် အချိန်တန်ခဲ့ပြီ ထင်ပါသည်။ ဖေဖေပြန်လာဖို့ အချိန်သင့်ပြီလား။
“ဖေဖေ ပြန်လာချင်တာပေါ့ သမီးလေးရယ်။ ဒါပေမယ့်…”
ဖေဖေက တစ်ဘက်မှာ ငြိမ်သက်နေပြန်ကာ ခဏကြာလေမှ…
“သမီး ဘွားဘွား ဘာပြောသေးလဲ”
ဘွားဘွား၏ ပြောစကားများကို ဖေဖေ့အား အတိအကျ ပြန်မပြောချင်ပါ။ ဘွားဘွား၏ ဘ၀အတွေ့အကြုံ၊ လောကဓာဏ်အမျိုးမျိုးက သံသယကျွန်းမှာ မွန်းနစ်နေတတ်အောင် သူမကို သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လေသည်။ ယုံကြည်ခြင်း ဆိုသော စကားလုံးကို ဘွားဘွားတစ်ယောက် စာလုံးပေါင်းမေ့နေခဲ့ပြီ။
“ ဘွား အသက် ကြီးလှပြီ။ နေ့သေမလား၊ ညသေမလား အခြေအနေမှာ ဒီသား၊ ဒီသမီး၊ ဒီမြေးတွေနဲ့ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း သေချင်တာပေါ့ကွယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်သားကလေး အနားမှာ ထားပြီး တထိတ်ထိတ်တွေးပူနေရတာထက်စာရင် ဝေးနေရတဟာ… စိတ်မချမ်းသာပေမယ့် အပူတော့ လျော့သေးတယ် မဟုတ်လား”
မေမေလည်း တိတ်တိတ်မျှော်ရှာမည်ပင်။ သို့ပေမယ့် စိုးရွံ့စိတ်ငယ်မှုသောကတွေ ပွေလီဖိစီးလျှက်မို့ မလူးသာ၊ မလွန့်သာ ခံစားရခက်ခဲရှာမည်ထင်၏။ ဖေဖေကတော့…
အခါများစွာက ထုံးစံအတိုင်း အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် နှေးကွေးလေးအီကာ မက်ဆေ့ခ်ျ ရောက်မလာနိုင်ပြန်ဘူး ထင်သည်။ ညိုတို့ သားအဖ၏ မီးအစိမ်းကလေးတွေ မှေးမှိန် ဖြူလျော်သွားကြပြန်ပြီ။
နောက်တစ်နေ့ လိုင်းပေါ်ပြန်အရောက် မေးလ်ဘောက်စ်ကို အလောတကြီး ဖွင့်စစ်မိလေလျှင်တော့ ဖေဖေ့ မက်ဆေ့ခ်ျကလေးက အားလျော့ ညှိုးငယ်စွာ စောင့်ကြိုနေနှင့်ပါသည်။
“သမီးတို့ဆီပြန်လာဖို့ ဖေဖေ အချိန်ပြည့် မျှော်လင့်နေတယ်။ တစ်နေ့နေ့… ကံအခွင့်ပေးတဲ့နေ့ပေါ့ သမီးလေးရယ်။ တကယ်တမ်းမှာလည်း အဲဒီနေ့က တို့အားလုံးအတွက် မဝေးတော့ဘူး မဟုတ်လား”
Posted by သတိုး at 8:02 PM3comments:
လုပ်ငန်းတူ၊ စီးပွားပြိုင်…တခြားလ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွေက ဂြိုလ်တုစလောင်းတွေ အပြိုင်အဆိုင်တတ်ဆင်ပြီး ရောင်းအားမြှင့်လာကြတော့ ကိုယ်တွေလည်း မနေသာတော့ဘူး။
``တို့ဆိုင်လည်း စလောင်းဆင်မှ ဖြစ်မယ်´´
ဒါပေမယ့် ကိစ္စက ပြီးမသွားဘူး။
လက်တစ်ဘက်က တီဗီချယ်နယ်တွေ အမျိုးမျိုးပြောင်းနေ၊ ချိန်ညှိနေချိန်မှာတောင် ကျန်လက် တစ်ဘက်က မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်…တစ်ခုမဟုတ်၊ တစ်ခုကိုလည်း ကိုင်ထား၊ ဖွင့်ထားလျှက်…။ ပြီး…. နှုတ်ကလည်း…..
အိုင်တီခေတ်မှာ သတင်းနဲ့ နည်းပညာပျံ့နှံ့မှုက လျှင်မြန်လွန်းလို့ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးဟာ အရှေ့နဲ့ အနောက် အဆီးအတားမရှိ။ တသီးတခြားစီ မဟုတ်တော့ပဲ တစ်သားတည်းဖြစ်သွားပြီလို့ ဆိုလိုချင်ပုံပဲ။
ပေါင်းသင်းလာခဲ့ကြတာပဲ အိမ်ထောင်သက် အနှစ် နှစ်ဆယ်နီပါး ဆိုတော့ ကိုယ့်အိမ်ဦးနတ် အကြောင်းလည်း ကိုယ်သာ အသိဆုံးလေ။ အဲတော့ဖက်ပြိုင်ပြောမနေချင်တော့ဘူး။ အသံတိတ်မျက်စောင်း တစ်ချက် ဒိုင်းခနဲပစ်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။
ရွှေကိုယ်တော်က မိန်းမနဲ့ မပြောရတော့ သောက်သုံးသူတွေ စားပွဲဝိုင်းမှာ ၀င်ထိုင်ပြီး အာဘောင်၊ အာရင်း သန်နေပြန်ပါရော….။
စကားဆိုတာက ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာ ဖြစ်နေစေဦးတော့။ ကာလ၊ ဒေသ၊ ပြီးတော့….ကိုယ်ပြောမယ့် တစ်ဘက်သားရဲ့ ခံယူနိုင်စွမ်းကိုလည်း တွက်ချင့် စဉ်းစားရဦးမှာ မဟုတ်လား။
တခြားသူတွေကရော…သူပြောလာသမျှ မျက်စေ့စုံမှိတ်ပြီး ယုံကြည်ပေးမှာတဲ့လား။ သူတို့ တစ်သက်လုံး ယူမှတ်လာခဲ့ကြတာက``ကမ္ဘာလုံး´´….. ပဲလေ။ ဟိုလူတွေက အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ပြန်ငြင်း၊ ၀ိုင်းဟားကြတော့ သူပဲ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ရပြန်ရော မဟုတ်လား။
``ကဲ…ရှင့် ကမ္ဘာပြားကြီး ခဏထားပြီး ဖက်ရှင်ချယ်နယ်တစ်ခုလောက် ပြောင်းဖွင့်ပေး လိုက်ပါဦး။ ကျွန်မတို့ ဖောက်သည်တွေ ပျင်းလှရောပေါ့။´´
လာဘ်မမြင်တတ်တော့ နေရာတကာ လိုက်ပြောနေရတာသာ ကြည့်တော့။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် သူ့ကမ္ဘာပြားကြီးကို လုံးဝကို စိတ်မ၀င်စားဘူး။ အဓိက ကတော့ ကိုယ့်လ္ဘက်ရည်ဆိုင်လေး စည်စည်ကားကား၊ ရောင်းပန်းသာနေဖို့သာပဲ။ အဲတော့…ကိုယ်တွေရဲ့ အားကိုးတကြီး တိုင်တည်ရာ ``အဘဆရာကြီး´´ ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း တသွေမတိမ်းစေရ။ အပွင့်၊အခက်၊ အရွက်၊အညွန့်တွေနဲ့ တစ်ဆိုင်လုံး ဝေနေစေတယ်။ အပွင့်အရွက်တဝေေ၀ကို ဘယ်တော့မှ ညှိုးခြောက် မနေစေရဘူး။ ဆီမီး၊ အမွှေးနံ့သာတိုင်တွေနဲ့ လည်း နေ့၊ညမပြတ် ထုံအီမွှေးပျံ့နေစေတယ်။ ကဲ….ဘာလိုသေးလဲ..။
ဒီရက်တွေမှာတော့ စိတ်ကတိုတယ်။ ကမ္ဘာဖလားဘောလုံး ပွဲစဉ်တွေက ဆက်တိုက်လာနေပြီ မဟုတ်လား။ နေ့နေ့၊ညည ဈေးရောင်း ကောင်းလှတာ အတွက်တော့ ပျော်ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ညည့်နက်ပွဲတွေဆက်လာတော့ လူက ပင်ပမ်းရုံမက အအိပ်ပျက်တဲ့ဒဏ်ကိုပါခံလာရပြီ။
ညဘက် အနားမရလို့ နေ့လည်ဘက်တွေမှာရောတဲ့။ တရေးတောင် မမှေးရဲပါဘူး။ သူ့နဖူးဆီ ညစဉ်တဒိုင်းဒိုင်း ထိမှန်နေတဲ့ ဘောလုံးက ကိုယ်တစ်ချက်ကလေး သတိလစ်၊ အိပ်ငိုက်မိတာနဲ့ ကောင်တာစားပွဲက ကိုယ့်ပိုက်ဆံ အံဆွဲကို လာမှန်တော့မှာ အသေအချာ။ အဲတော့ …အံဆွဲသော့ကို ကျစ်ကျစ်ဆုတ်လို့ ငုတ်တုတ်၊ ငိုက်ရတယ် ဆိုရုံကလေးပဲ။
သူ့မှာတော့ အကြိုက်တူ၊ စရိုက်ဝါသနာတူ… သူ့ဘော်ဒါ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ နေ့လည်း တရုန်းရုန်း။ ညမှာလည်း တစ်လုံးလုံး။အံမယ်….။ ဘောလုံးအသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက် ပေါင်းစုံကိုတောင် အင်တာနက်မှာရှာဖွေလို့ ခန့်မှန်းတွက်ချက်တတ်နေကြပြီ ဆိုပဲ။
``အဲဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့။ကမ္ဘာကြီး ပြားသွားပြီလို့….´´
ဟွန်း….။သူတို့နဲ့ တွေ့မှပဲ ကမ္ဘာကြီးခမျာ…
ရှည်လျား ကြာငြောင်းလွန်းလှတဲ့ နွေ။ မေလလည်ရောက်လာတဲ့အထိ အစွမ်းပြလို့ကောင်းနေဆဲပင်။ ပူချက်ကလည်း ကမ်းကို ကုန်ရော ပြောရတော့မလို။ ယောရုဝ ဒယ်အိုးနှုတ်ခမ်းမှာ အဖီဆွယ် နေမိသလားတောင် ထင်ယောင်မှားချင်တော့သည်။
တိမ်းသားတစ်မျှင်တစ်စမျှ စွန်းထင်မနေသော စင်ကြယ်ကြည်လင်လွန်းလှသည့်ကောင်းကင်ဆီ ရူးမိုက်စွာ လှမ်းမျှော်ကြည့်မိတော့ စူးရှစွာလင်းပြက်နေသော အလျှံရဲရဲ မီးကျည်ခဲတစ်စက မျက်စေ့အစုံကို ကျိန်းစပ်စေပြန်၏။
မေ(၁၆)ရက်နေ့မှာ ဖြိုးဖြိုးဖျောက်ဖျောက် မိုးပေါက်ကလေးတွေ တဖွဲဖွဲ စွေခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် မြေပြင်ကလေး သိပ်သည်းသွားရရုံ။ ၀န်းကျင်တစ်ခွင် အုံ့ပြပြနေသာရုံကလေးသာ။
မေ(၁၈)ရက်နေ့မှာတော့ ဆိုင်းမဆင့်၊ဗုံမပါ လေရောမိုးပါ သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလေတော့ပြီ။ ပျော်လိုက်ကြတာ။
နွေနှောင်းကာလတစ်လျှောက်လုံး သောက်သုံးရေအတွက် ပူပန်ရ၊ ချွေးတလုံးလုံး ကြံစည်သယ်ယူခဲ့ရတဲ့ ဘ၀အမောတွေ။ လယ်မြေတွေ ပက်ကြားအက်ကုန်ပြီတဲ့..။ ဒီနှစ် ထွန်တုံး၊ထွန်တံ ကိုင်ကြရပါဦးတော့မလား။ ပူပန်တွေးမောခဲ့ရတာတွေ။ ခါဦးမိုးနှင့်အတူ လျှောခနဲ ပြေပျောက်လွင့်ပြယ်သည်။
အိမ်ရှိလူကုန် တံစက်မြိတ်ဖျားဆီ အာရုံရောက်ကာ ဗျာများနေကြစဉ်....
``ဟဲ့ ဒီနေရာက မိုးတွေ ယိုကျနေပါလား´´
အိမ်မအလည်တည့်တည့်ဆီ လက်ညှိုးညွှန်လျှက် တစ်ယာက်က သတိပေးသည်။ လေပြင်းတစ်ချက် အဝှေ့မှာ အိမ်ခေါင်ပွင့်လန် သွားခဲ့တာကိုး။ ဒီလေဒီမိုးကြားမှာ အိမ်ခေါင်တက်ပြင်ကြဖို့ ကြိုးစားကြည့်ကြသေးသော်လည်း အချီးနှီးသာ။
``သင်္ကြန်တွင်းတုန်းကလည်း အိမ်ကိုရေမဆေးခဲ့ရသေးဘူး မှုတ်လား။ ခု..တစ်ခါတည်း
အိမ်ရှိလူကုန် တပျော်တပါး တစ်အိမ်လုံးကို ရေဖြင့် ဆေးချကြသည်။
ဘုးရားခန်းကို စင်ကြယ်စွာ ရေဆေးသန့်စင်အပြီးမှာ အမေအိုက ရေတစ်ဖန်ခွက် တောင်းလိုက်သည်။ မွှေးနံ့သာရည် သုံးလေးစက်ရောလိုက်လျှက် သပြေခက်ကလေး နှစ်ကာ..၊ဖြန်ကာ...။ ပဋ္ဌန်းဒေသနာတော်နှင့် ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်ကို နှုတ်တက်ရွရွ ရွတ်ဖတ်နေလို့ရယ်။
ကျန်အိမ်သားအားလုံးကတော့ ပဲကြီးခွံလို အရည်တွန့်နေသော ခြေဖျား၊လက်ဖျားကလေးတွေဆီ ကိုယ်စီကြည့်ငေးလျှက် မျှော်လင့်ကျေနပ်နေခဲ့ကြပါသည်။ ။
***မဟေသီမဂ္ဂဇင်း စက်တင်ဘာ/အောက်တိုဘာ(၂၀၁၁) မှာ နှစ်လဆက်တိုက် ပါလာခဲ့ တစ်မျက်နှာ ၀တ္ထုတိုလေး နှစ်ပုစ်ပါ။ ဘောလုံးပွဲ ၀တ္ထုလေးက ရှကီရာရဲ့ ၀ါကာ၊၀ါကာ အသံတွေညံနေချိန်မှာ ရေးဖြစ်ခဲ့တာ..။ မေ့လောက်ရှိနေမှ မဂ္ဂဇင်းမှာ ပြန်မြင်ရတော့ ခုတလောလေးမှာ ဘောလုံးပွဲကြည့်ပြီး FBမှာ ၀င်အော်နေတတ်တဲ့ ဆရာ ဦးဟန်ကြည်နဲ့ ကိုမြစ် တို့ နှစ်ယောက်ကို ပြေးသတိရမိသေးတယ်း)
Posted by သတိုး at 11:18 AM7comments:
Labels: တစ်မျက်နှာ ၀တ္ထုတိုလေးတွေ
သားတို့အဖေနှင့် အိမ်ထောင်ကျစကာလက ကျွန်မတို့စုံတွဲကို ဖေဖေ့ညီမ အပျိုကြီးတွေက မျက်စေ့ စပါးမွေးစူးခဲ့ကြသည်တဲ့။ ကွယ်ရာမှာ မဲ့ရွဲ့ရှုံချခဲ့သည်သာမက ရှေ့တွင်လည်း ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပင် ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သေးတာ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေသေးသည်။
“ညည်းတို့ကိုယ် ညည်းတို့ ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေ မှတ်နေလား”
“ နွယ်တို့က ဘာဖြစ်နေလို့လဲ”
“ယောက်ျားသွားလေရာ ညည်းက တတန်းတန်းလိုက်နေစရာလား။ ဟိုနားလည်း တတွဲတွဲ၊ ဒီနားလည်း ပူးကပ်ကပ်..။ ဟွန်း ပြောလိုက်ချင်ဘူး”
ဒေါ်လေးအကြီး၏ စကားကြောင့် ကျွန်မ ဖြန်းခနဲ အရှက်အိုးကွဲသွားတော့မတတ် ရှိရဆဲ ဒေါ်လေးအငယ်က…
“ ဒီလောက် ဖြစ်နေကြရင်လည်း နှစ်ယောက်ကြိုးနဲ့ ပူးချည်ထားကြ”
သားတို့အဖေနားသို့ ထိုစကားတွေ ပြန်ပြောပြသောအခါ…
“နွယ့် ဒေါ်လေးတို့က အပျိုကြီးတွေဆိုတော့ ရိုးတာကိုး”
ဟု နားလည်စွာ ဆိုခဲ့ရှာသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်သား တော်တန်ရုံ ပွဲလမ်းများမှလွဲလျှင် (အထူးသဖြင့် ဒေါ်လေးတို့ရှေ့မှာ) နှစ်ယောက်တွဲ ပွန်းတီးနီးကပ်သောအခြေအနေကို သတိထား ရှောင်ကြရပါသည်။ သုိ့ပေမယ့် ဒေါ်လေးတို့၏ အပြောကတော့ လုံးဝ လွတ်မြောက်ခဲ့ရသည် မဟုတ်ပါ။ သူတို့က ကျွန်မတို့၏ မင်္ဂလာ ကိစ္စမှာကတည်းက အမြင်မကြည်လင်ခဲ့ကြသူတွေ မဟုတ်လား။
ကျွန်မတို့၏ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကို မြို့လယ်ရှိ ‘န၀ရတ်’ ခန်းမမှာ ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်မတို့မြို့တွင် န၀ရတ်ခန်းမက ခေတ်စားနေချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ၀ါကျွတ်သည်နှင့် နေ့ကောင်းရက်သာ အားလုံးမှာ ဘွတ်ကင်တွေပြည့်နေနှင့်ပြီ။ သည်ခန်းမမှာ မင်္ဂလာပွဲနွှဲရပါမည့်အရေးအတွက် ကျွန်မတို့ နှစ်ဦးသား အချိန် အကြာကြီး ကြိုတင်တိုင်ပင်ပြင်ဆင်ကာ မရအရ ရက်ချိတ်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤမျှ အပင်ပမ်းခံကာ ၀ီရိယစိုက်ထုတ်ခဲ့ရသည်နှင့် မတန်အောင်ပင် ဒေါ်လေးတို့ပြောပုံကြောင့် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ကသိကအောင့် ဖြစ်ကြရပါသည်။
“ညည်းတို့ဟာကလည်း လူလည်ကောင်ကြီးမှာ မရှက်မကြောက်…”
‘တစ်သက်မှာ တစ်မင်္ဂလာပဲဆောင်တာပါ ဒေါ်လေးတို့ရယ်။ ဘာကို ရှက်စရာလိုလို့လဲ”
ကျွန်မ၏ လေသံက အနည်းငယ်တော့ စူးစူးစွာစွာ ဖြစ်နေခဲ့မည် ထင်သည်။ ဒေါ်လေးတို့နှင့် ခုမှ တွေ့သိရသော ခင်ပွန်းလောင်း၏ မျက်နှာကိုလည်း ခိုးကြည့် အကဲခပ်ရသေးသည်။ နှစ်ဘက်မိဘ၊ လူကြီးစုံရာရှေ့မှာ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းပြီးဖြစ်သော်လည်း ကျွန်မက သူ့အား အိမ်လည်မခေါ်ဝံ့ခဲ့။ သူကလည်း အကြောင်းကိစ္စထူးမရှိပဲ ၀င်ထွက်လည်ပတ်ရန် ခပ်အန်းအန်းဖြစ်နေသေးသည်ဟုဆိုကာ အ၀င်အထွက် မရှိသလောက်မို့ ကျွန်မတို့မိသားစုနှင့် စိမ်းသစ်နေသေးသည်။ ဒေါ်လေးတို့အကြောင်းကို ကျွန်မထံမှသိရသလောက်နှင့်ပင် သူက အနည်းငယ်တော့ လန့်ရှိန်နေ၏။
‘ခုခေတ် မိန်းကလေးတွေများ တကယ် မလွယ်ဘူး”
တစ်ယောက်က စလိုက်ရုံရှိသေးသည်။ နောက်တစ်ယောက်က သံတူကြောင်းကွဲစကားတွေနှင့် တက်ညီလက်ညီ ထောက်ခံလိုက်လျှက်….`
“ဟုတ်ပတော်။ ကျုပ်တို့ငယ်တုန်းကဖြင့် သတို့သမီးဆို မြင်ဖူးချင်လို့ ဟို ထရံပေါက်၊ ဒီ ထရံပေါက်တွေကနေ ချောင်းလိုက်၊ မြောင်းလိုက်ရတာ ဆိုတာ…။ ခုတော့ဖြင့် သတို့သမီးကို သွားတဖြဲဖြဲနဲ့ မမြင်ချင်မှ အဆုံး။ လူလည်ကောင်ထွက် ဧည့်ခံနေတာလေ”
ကျွန်မတို့ နှစ်ဦးသားခမျာ ဘာပြန်ပြောရမှန်းကို မသိတတ်နိုင်ခဲ့။ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဧည့်ခံပွဲကျင်းပတော့မည့် သတို့သား၊ သတို့သမီးလောင်းတွေရှေ့မှာ ပြောနေသောစကားတွေက ဘယ်လိုကြီးတွေမှန်းကိုမသိ။ ကိုယ်တွေ၏ ဧည့်ခံပွဲမှာ ကိုယ်တိုင်ဧည့်ခံတာဟာ အရှက်နည်းတာဟု အဓိပ္ပါယ်ရောက်နေတော့ပြီ။
“ဒေါ်လေးတို့ ခေတ်နဲ့တော့ တူမလား ဒေါ်လေးရယ်”
အောက်ကလိအာရင်း သတို့သားလောင်းကို အသာလက်ကုတ်ကာ နောက်ဆုတ်ခဲ့ရသည်။ သူကတော့ အမှုမထားစွာ ရယ်မောနေနိုင်သေးသည်မို့ တော်တော့သည်။
ကျွန်မတို့ငယ်စဉ်က မေမေ့ ညီမ၀မ်းကွဲတစ်ယောက်၏ မင်္ဂလာဆောင်ကို မှတ်မှတ်ရရရှိနေသေးသည်မို့ သူ့ကို ပြန်ပြောပြရသေးသည်။ သတို့သား သတို့သမီးများက တစ်ရပ်ကွက်တည်းသားချင်းတွေ ဖြစ်သည်။ လမ်း တစ်လမ်းသာခြားသည်မို့ အိမ်ချင်းကလည်း မဝေးလှ။ ဟိုဘက်၊ ဒီဘက် နှစ်အိမ်စလုံးမှ လော်စပီကာတွေ အုန်းပင်ထိပ်ဖျားတင်ကာ အပြိုင်ဖွင့်နေခဲ့ကြရာ တစ်ရပ်ကွက်လုံးမှာ အခါတော်ပေးတာက နတ်ရေးငယ်ရွှေစာ ဆိုသောအသံတွေ ညံစာနေတော့ကာ ကိုယ့်အိမ်တွင်းမှာပင် စကားစမြည် ကောင်းကောင်းဆိုမရ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ စိတ်အနှောင့် အယှက် မဖြစ်ခဲ့ကြဘူး ထင်ပါသည်။ ညနေရီမှာ ၀တ်ကောင်းစားလှတွေ ပြိုးပြက်လျှက် ဟိုဘက်အိမ်၊ သည်ဘက်အိမ် သွားချည်ပြန်ချည်ကူးလူးကာ တစ်ရပ်ကွက်လုံး ပြုံးပျော်နေခဲ့ကြသည်ပင်။
ထိုစဉ်ကတည်းက ကျွန်မတို့ ကလေးငယ်တွေက ဘ၀င်မကျနိုင်ခဲ့ကြပေ။ မင်္ဂလာဆောင် တစ်ခုမှာ အဓိက ဇာတ်လိုက်ဖြစ်သော သတို့သားနှင့် သတို့သမီးကို လူတိုင်း စိတ်ဝင်စားကြပါသည်။ တစ်သက်လုံးက မြင်တွေ့ရင်းနှီးဖူးပြီးသားလူတွေဖြစ်သော်လည်း သည်အချိန်မှာတော့ တစ်မျိုးထူးခြားနေလေမလားဟု စိတ်ဝင်တစားရှိကြသည်။ အထူးသဖြင့် သတို့သမီးကို ပိုလို့ စိတ်ဝင်စားကြသည်။ ဆံထုံးကလေးက ဘယ်လိုထုံးဖွဲ့ထားမှာလဲ။ မိတ်ကပ်ဖွေးဖွေးနှင့် ဘယ်လောက် လှပနေမှာလည်း။ ပုဝါကလေးကို စွယ်စုံချထားမှာလား။ ပခုံးတစ်ဖက်မှာ ပန်းပွင့်ကလေးဖော်ကာ ချထားလျှင်လည်း လှမည်ပင်။ ၀တ်စုံကရော ဘာအရောင်လေးလဲ။
ကျွန်မတို့ရောက်နေသော မင်္ဂလာဆောင်အိမ်က မိန်းကလေး၏ အိမ်ဖြစ်သည်။ ဧည့်ခံပွဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ သတို့သမီးကိုမူ မမြင်တွေ့ရ။ ယောက်ျားလေးဘက်ကို ရောက်လျှင်တော့ သတို့သားရော၊ သတို့သမီးကိုပါ မြင်ရမည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ဟိုဘက်အိမ်မှာလည်း သတို့သားတစ်ယောက်တည်း ငေါင်းစင်းစင်းကြီး ဧည့်ခံနေပါသည်။
“မေမေ…။ ဒေါ်လေးက ဘယ်အိမ်မှာလဲ”
သတို့သား သတို့သမီး တစ်နေရာတည်းမှာ ဧည့်ခံခွင့်က ခိုးရာလိုက်ပြေးသော စုံတွဲတွေမှာသာ ရှိကြတာဖြစ်သည်။ တစ်နေရာတည်း ၊တစ်အိမ်တည်းမှာ(ယောက်ျားလေးရှင်၏ နေအိမ်) ဆိုသော်လည်း နှစ်ကိုယ်ယှဉ်တွဲ ဧည့်ခံခွင့်တော့ မရကြရှာပါ။ သတို့သားကသာ ဧည့်သည်တွေကြားမှာ တလွှားလွှားနှင့် ဧည့်ခံနိုင်တာဖြစ်ပါသည်။ သတို့သမီးကိုတော့ ဧည့်သည်စုံအောင် တွေမြင်ခွင့် မရနိုင်ကြပေ။ ခမျာ အခန်းတစ်ခုထဲမှာ ရံရွေတော်များ ခြံရံခစားလျှက် အလှကြည့်ခံနေရသည်။ ‘အပ်ဆောင်’ ဟု ကျွန်မတို့ အရပ်က ခေါ်ကြပါသည်။ မိန်းကလေး၏ အိမ်သို့ လူကြီးစုံရာဖြင့် ထိုအချိန်ကျမှ ပြန်အပ်ကြရသည်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် တောင်းရမ်းလက်ထပ်ယူကြသူတွေထက်တော့ ဂုဏ်ငယ်သည်ဟု အများက သတ်မှတ်ကြပါသည်။
ယခု မင်္ဂလာဆောင်ကတော့ နှစ်ဖက်မိဘတွေ ကျေနပ်ကြည်ဖြူစွာ ကြောင်းလမ်းကာ တောင်းရမ်းယူသောပွဲပေမို့ သတို့သမီးက သူ့အိမ်မှာပဲ ရှိနေရသည်။ ယောက်ျားလေးဖက်မှ ခန်းဝင်ပစ္စည်း အပြည့်အစုံဖြင့် သွားရောက် တောင်းရမ်းလျှက် မင်္ဂလာဆောင်နှင်းရမှာ ဖြစ်သည်တဲ့။
သတို့သမီးအိမ်သို့ ပြန်ပြေးကာ ကမန်းကတန်း ရှာပုံတော်ဖွင့်လေမှ မှောင်မှောင်၊ လှောင်လှာင် အခန်းကျည်းလေးထဲမှာ ကျွန်မတို့၏ ဒေါ်လေးကို ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ သို့သော် ဒေါ်လေးအား မမြင်ရ။ အမျိုးသမီး အရွယ်စုံက သူမကို ၀ိုင်းရံကွယ်ကာထားလိုက်သေးသည်။ အိုး… ဒီလိုမျိုးဖြင့် ကျွန်မတော့ စိတ်အိုက်တာနှင့် သေမှာပဲ။ အခန်းက လေလည်း အလုံအလောက်မရ။ လူတွေက နံဘေးမှာ ၀ိုင်းလို့ အုံလို့။ ကိုယ်ပေါ်မှာလည်း ၀တ်ဆင်နေမကျသော ၀တ်ကောင်းစားလှတွေနှင့် ။ ပြင်ဆင်ခြယ်သလို့လည်း ထားသေးတာ မဟုတ်လား။ ကျွန်မ၏ ဒေါ်လေးတစ်ယောက် အသက်ရှူလို့မှ ၀ပါသေးရဲ့လားမသိ။ သတို့သားရယ်… မြန်မြန်လာခေါ်ပါတော့။
ဘယ်လောက်များ အဖြစ်သည်းကြသလဲဟု ကျွန်မက အရွယ်နှင့်မမျှ တွေးမိခဲ့သေးတာဖြစ်သည်။ သတို့သားဘက်က ဆွေမျိုးမိဘတွေက ရောက်လာပြီး ပြောကြဆိုကြ၊ သတို့သမီးဘက်က ကြိုဆိုနေရာချထားကြ။ သတို့သားခမျာ သူ၏ သတို့သမီးကို မသိမသာ ရှာဖွေစ ပြုပြီ။ သို့ပေမယ့် ဘိတ်သိတ်ဆရာက စာသံပေသံနှင့် ခေါ်မထုတ်မချင်း သူကောင်းသားကလေးခမျာ လူပုံအလည်မှာ ငေါင်းစင်းစင်း။ သတို့သမီး အခန်းထဲမှ ထွက်လာတော့လည်း ချက်ချင်းလှမ်းကြည့်လို့ မမြင်နိုင်ပါ။ အခန်းထဲမှာ စောင့်ကြပ်ဝန်းရံနေကြကုန်သော အမျိုးသမီးကြီးငယ်တို့က တွဲကူဝိုင်းရံထားသေးသည်မှာ သတို့သမီးသည်ပင် သူ့လမ်းသူ မမြင်နိုင်။ မင်္ဂလာခန်းမအတွင်း စောင့်စားငံလင့်နေကြသော ပရိတ်သတ်ကလည်း လည်တိုင်တွေကို ဆွဲဆန့်ကာ မျှော်နေလိုက်ကြသည်မှာ ညွတ်သီးနေတော့သည်။ သတို့သား၏ နံဘေးမှာ ယှဉ်တွဲထိုင်ချလိုက်ရသည့်တိုင် သူမ ခေါင်းမဖော်ရဲသေး။ သို့ပေမယ့် ဧည့်ခံပွဲကာလတစ်လျှောက်လုံး အခန်းကျဉ်းထဲမှာ မွန်းကျပ်ပိတ်လှောင်ခံထားရသည်နှင့် စာလျှင်တော့ အများကြီး သက်တောင့်သက်သာ ရှိမည်ထင်ပါသည်။ ဒေါ်လေးလို သတို့သမီးမျိုးတော့ မဖြစ်ချင်ဘူးဟု ထိုစဉ်ကတည်းက ကျွန်မစိတ်မှာ စွဲနေခဲ့သည်။
တကယ်တမ်း ကျွန်မ၏ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲမှာလည်း ကျွန်မ၏စိတ်တိုင်းကျ မင်္ဂလာခန်းမအလယ်မှာ နှစ်ကိုယ်ယှဉ်တွဲလျှက် ဧည့်ခံနိုင်ခဲ့သည်မို့ ကျေနပ်ရပါ၏။ ကျွန်မ၏ သတို့သားကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရပါသည်။ သို့သော် ဒေါ်လေးအပျိုကြီးများ၏ စားပွဲကိုတော့ ကျွန်မ တမင်မမြင်ယောင် ပြုနေခဲ့ရသည်မို့ ဇက်ကြီးက ညောင်းပြီး တောင့်တင်းနေသလိုထင်ရသည်။ သို့ပေမယ့် ကျွန်မ ယောင်လို့တောင် သူတို့စားပွဲအနီးသို့ မသီရဲ။ မနှစ်သက်နိုင်သော ဟန်မူယာမျက်နှာထားတွေနှင့် ပြုံးမဲ့မဲ့ရှိနေခဲ့ကြတာ မင်္ဂလာပွဲ တစ်လျှောက်လုံး မဟုတ်လား။ မင်္ဂလာအမှတ်တရ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံသောအခါမှာလည်း ဓါတ်ပုံဆရာက…
“နည်းနည်းကပ်ပါဦးဗျာ။ သတို့သမီးက သတို့သားလက်ကလေးကို ချိတ်ထား။ ဟုတ်ပြီ”
ထိုအစဉ်အလာအားလုံးကို ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်စလုံး မသိလို့မှ မဟုတ်ပဲ။ မျက်လုံးဒေါက်ထောက်ကြည့်နေကြသော ဒေါ်လေးတို့ကို လန့်နေလို့သာ။ စိတ်ထဲမတွေ့လျှင် လူရှေ့သူရှေ့မရှောင် ပြောချလိုက်လေမလားဟု တထင့်ထင့်ဖြစ်နေခဲ့ရတာ မဟုတ်လား။ ဓါတ်ပုံထဲမှ ကျွန်မ၏ အပြုံးသည် မသက်မသာ၊ မလွတ်မလပ်နှင့် တင်းကျပ်နေခဲ့တာ ခုတိုင် သက်သေရှိနေဆဲပင်။
စကားစတစ်ခုရလျှင် မပြီးစတမ်း၊ နှစ်ပေါက်အောင် မမေ့စတမ်း ၊ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်း အစဖော်ကာ ရေနှူးလေ့ရှိသော ဒေါ်လေးနှစ်ယောက်၏ စကားမြားဒဏ်ကို ကျွန်မတို့ အလူးအလဲခံခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်မ၏ ၀ဋ်ဒုက္ခများသည် သူတို့၏ မြေး၊ ကျွန်မတို့၏ တူမ၀မ်းကွဲတစ်ယောက် လက်ထပ်လေမှ တစ်ဝက်တစ်ပျက် ကျွတ်လွတ်နိုင်ခဲ့တော့တာ ဖြစ်သည်။
သူတို့၏ မင်္ဂလာပွဲက ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ပါ ပါလိုက်သေးသည်မို့ ပိုလို့ ပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကင်မရာသမားကလည်း ရေချိုးခန်းမှအထွက် မျက်နှာပေါ် မိတ်ကပ်တင်ကတည်းက ၀ီရိယစိုက်ကာ မှတ်တမ်းတင်နေတော့တာဖြစ်သည်။ နေအိမ်မှ မင်္ဂလာ ခန်းမဆီ အသွား၊ မင်္ဂလာပွဲတစ်လျှောက်လုံး ဧည့်ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်မျှ မကျန်ရလေအောင် မှတ်တမ်းတင်ပေးနေသည်သာမက ၊ မင်္ဂလာပွဲမှ အိမ်သို့အပြန် လမ်းအထိလည်း မလစ်ဟင်းစေရ။ ထိုမျှနှင့် အားမရပဲ မင်္ဂလာအိပ်ခန်းအထိ ၀င်လိုက်ကာ လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းတွေ နှစ်ဦးအတူ ဖွင့်ဖောက်လျှက် ကြည်နူးကျီစယ်ဟန်တွေလည်း မလွတ်စေရ။ မင်္ဂလာရေခဲမုန့်ကို အပြန်အလှန် ခွံ့ကျွေးကြသည့် ကယုကယင်ပုံရိပ်တွေလည်း ပါသေးသည်။ ပြီး… ကိတ်မုန့်တစ်တုံးတည်းကို နှုပ်ခမ်းချင်းနီးကပ်စွာ ခွံ့ကျွေးလျှက် နှစ်ယောက်ပြိုင်တူ ကိုက်ပြလိုက်သေးရာ ဒေါ်လေးတို့ခင်မျာ ဗီဒီယိုတိတ်ခွေကိုပင် သေချာမကြည့်နိုင်အား။ တက်ညီလက်ညီ .. ဆွေ့ဆွေ့ခုန်နေတော့လျှက်….
“ဟယ်… ပိတ်၊ ပိတ်..၊ အဲဒီ တီဗွီကြီးကို ပိတ်လိုက်ကြစမ်း”
“ရှက်စရာ ကောင်းလိုက်တာနော် ဟင်း။ ဘယ်လို အရှက်နည်းတဲ့ ဟာတွေနဲ့ လာတွေ့နေရလည်း မသိတော့ဘူး….”
အနောက်တိုင်း သတို့သမီးဝတ်စုံ၊ ရင်စည်းဂါဝန်ရှည် ၀တ်မည်ဆိုကတည်းက မနှစ်မျို့နိုင်ခဲ့တာတွေနှင့် ရောနှောစုပေါင်းကာ တမဲတရွဲ့ ကောင်းချီးပေးလိုက်ကြသည်မှာ သတို့သမီး မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်ကြည် သီသီဝေ့ရသည်အထိပင်။ ဖေဖေ့ကိုတော့ အစ်ကိုကြီးရယ်လို့ ဒေါ်လေးတို့ လန့်ရှိန်ကောင်းသည်ရယ်လို့ တိုင်တန်းမိကြသေးသည်။
“…တို့များခေတ်ကတော့ အရှေ့ခုနစ်အိမ်၊ အနောက်ခုနစ်အိမ် အသိမှတ်ပြုရင်ပဲ ပုဆိုးတန်းတင် အကြင်လင်မယား အရာ မြောက်တာပဲ။ ခုလည်း မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေမှာတော့ ဒီအတိုင်း ရှိနေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ခေတ်က ဥပဒေ လိုက်မမီအောင် ရှုပ်ထွေးလွန်းတော့ လက်ထပ်စာချုပ်လည်း ချုပ်ကြရတာပဲ။ တခြားအဆာပလာတွေနဲ့လည်း ဇာချဲ့ကြတာပဲ။ အဲဒါတွေ လိုက်ပြောနေရင် ဆုံးမှာ ကို မဟုတ်တော့ဘူး။ နင်တို့ပဲ မောမှာပဲ”
ဖေဖေ့စကားက ဘယ်သူ့ဘကကိုလိုက်ပြောမှန်းကို မသိပေမယ့် ဒေါ်လေးတို့နှစ်ဦးသာ လေသံလျှော့သွားကြတာက အမြတ်ဖြစ်တော့သည်။ ဒါတောင်…
“အင်း နောက်ဟာတွေလက်ထက်ကျရင် ဘယ်လိုလာကြဦးမယ် မသိဘူး။ ရင်လေးတယ်”
“ ပူမနေစမ်းပါနဲ့။ အဲဒီအချိန်ကျရင် နင်တို့၊ ငါတို့က သေပြီ”
ဖေဖေက ရယ်ဟဟ ဆိုခဲ့သေးသည်။
ဒါပေမယ့် ဖေဖေရော၊ ဒေါ်လေးတို့ရော သက်ရှိထင်ရှားရှိနေဆဲမှာပင် ကျွန်မ၏ သားတော်မောင်က အရွယ်ရောက်လာခဲ့တော့တာဖြစ်သည်။
“မေ့ကို ဧည့်သည်တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပေးရဦးမယ်”
အပြောက နောက်ကျသေးသည်။ လူကဖြင့် အိမ်ပေါ်ရောက်နေပြီ။ ရုပ်ရည်ကလေးက နုနုမျစ်မျစ်၊ စင်စင်ကြယ်ကြယ်ကလေး။ မျိုးရိုးပညာ ခေမယ့်သူလေးတော့ မဟုတ်တန်ရာ။ ခမျာ အနေမခက်စေရန် ဖော်ရွေစွာ ဖိတ်ကြိုမိသည်။ အခန်းထောင့်က ခရီးဆောင်အိတ်တချို့ကို အမြင်မှာတော့ သားကို မျက်မှောင်ချီမိပြီ။
“သား တစ်ခါတည်း ခိုးလာတာလား”
ခုမှ ကျောင်းပြီးစ၊ ဒီပလိုမာသင်တန်းတစ်ခု တက်ရောက်နေဆဲ သားအတွက် နှမျောဝမ်းနည်းစိတ်တို့ဖြင့် ဆို့ကြပ်နေဆဲ သားကတော့ အမေ့ဖြစ်အင်ကို ရယ်လို့သာနေသည်။
“အလည်လိုက်လာတာပါ မေမေရဲ့။ မေမေ့သားက အဲလောက်မိုက်ပါ့မလား”
‘ဒါဆို သူ့ကို ဘယ်မှာ တည်းခိုင်းရင် ကောင်းမလဲ”
“ဒီမှာပဲလေ။ သားတို့အိမ်မှာပဲ တည်းမှ ဖြစ်မှာပေါ့ မေမေရဲ့။ တခြားမှာ တည်းဖို့ သူ့မှာ အသိအကျွမ်းမှ ဒီမြို့မှာ မရှိတာ။ တည်းခိုခန်းတည်းရအောင်လည်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်း ဆိုတော့…”
ရင်ဖိရင်းသာ ဖိနေရတော့သည်။ သူကလေး သည်ခရီးကို တစ်ယောက်တည်းရောက်လာတာ မိဘတွေသာသိလျှင်တော့ ရင်ကျိုးမည်။ သားကြီး၏ အပြောအရတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကမ်းခြေခရီးထွက်မယ် ပြောလာခဲ့သည် ဆိုပဲ။ အမှန်တကယ် ကမ်းခြေခရီးထွက်သွားသော သူငယ်ချင်းတွေနှင့် အပြန်ဆုံရန် ပုသိမ်မြို့ပေါ်မှာ ချိန်းထားရစ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ကျွန်မထိတ်ခနဲ သတိရသွားသည်။
“ သားရော… သူတို့မြို့ကို အလည်ရောက်ဖူးပြီးပြီ မဟုတ်လား”
သားက မကွယ်မ၀ှက် ၀န်ခံဖော်ရလေသည်။
“သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားတာပါ မေမေရာ။ သူတို့မြို့မှာလည်း သားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရှိတယ်လေ။ အဲဒီ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ တည်းကြတာ”
မိန်းခလေးကို တစ်လမ်းထဲရှိ သား၏ ညီမ၀မ်းကွဲတွေထံ ပို့ပေးကာ ညအိပ်စေရသည်။ အိမ်ချင်းကလည်း မဝေးလှသည်မို့ ကလေးမက ညအိပ်ရုံသာ ပြန်ကာ မိုးလည်းမှ မိုးချုပ်အထိ သားနှင့်မခွဲ။
“သားတို့က လက်ထပ်ဖို့အထိ ရည်ရွယ်ထားကြတာလား”
“ခုချိန်မှာ မေမေ့သဘောထားက အရေးမကြီးသေးဘူး မဟုတ်လား”
“မသေချာသေးပါဘူး မေမေရာ။ ဘယ်လို ပြောရမလဲ။ အဲ...သူရော…သားရော… တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လေ့လာနေကြဆဲ ဆိုပါတော့”
ကျွန်မ စိတ်တွင်းမှ ဘုရားတမိသည်။
သူတို့ကတော့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဖြင့် မြို့လုံးပတ်ကာ တစ်ယောက်၏ သဘောအထာကို တစ်ဦးက အကဲစမ်းနေကြသလားမသိ။
ဘယ်ကစလို့ ရှင်းပြရမလဲတောင်မသိတော့။ မြို့ငယ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို သတိမထားမိသူလည်း မရှိသလောက် ဖြစ်နေပြီ။ ဘယ်သူ့ရှေ့မှ မရှောင်ပဲ နွယ့်တို့ကိုတောင် ဒက်ဒီ၊ မာမီ ခေါ်နေပြန်သေးရာ သားတို့အဖေပါ အနေခက်ရတော့သည်။ ကျွန်မ၏ ဒေါ်လေးတို့လည်း သည်တစ်ကြိမ်မှာတော့ သူတို့ အသည်းကျော် မြေးနှင့် ပတ်သက်နေကြလို့ပဲလား မသိ။ ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ရန် သတိမရကြ။ နှာစေးနေကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ထိုမိန်းခလေး မြို့သို့ပြန်သွားပြီး တစ်နှစ်မပြည့်မီ သူမ၏ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းသတင်း ရောက်ရှိလာသောအခါ သားက တက်တစ်ချက်ခေါက်ရုံမျှဖြင့် ပြီးပျောက်ကျေနပ်သွားခဲ့သော်လည်း နွယ်တို့ကတော့ တစ်ခါတစ်ရံ သူကလေးကို အလွမ်းငွေ့ငွေ့နှင့် အောက်မေ့နေမိသေးသည်။ ။
Posted by သတိုး at 10:44 AM No comments: